Isikhangeli seIntanethi esiKhangeleyo esiPhambili sokujonga i-imeyile | Martech Zone
Abantu baseLitmus bayikhuphile le infographic, I-Intanethi yokuKhangela i-Intanethi isengokhetho oluPhezulu kwi-imeyile esekwe kwiWebhu. Ndicinga ukuba kuhlala kusothusa abo bakwimveliso ye-Intanethi- abathi batsaleleke kwiChannel nakwiSafari, kodwa sihlala siphulukana nombono wokuba ngoobani abaxumi bethu kunye nendalo esingqongileyo abakuyo. Kulapho i-IE iphunyezwa kakhulu ngaphandle kokukhetha okuninzi.
I-imeyile kunye nabasebenzisi bewebhu kwihlabathi liphela banokufikelela kwizikhangeli ezininzi kunangaphambili. Iibrawuza ezikhoyo nezizithandayo nezizithandayo zikhuphisana nezikhangeli ezitsha abanokuzihlola. Ke, zeziphi izikhangeli ezikhethwa ngabasebenzisi? Ngaba iyahluka phakathi kokukhangela i-imeyile kunye nokubrawuza ngokubanzi? Makhe sijonge.
tags: umkhangelichromeemailimeyile yomkhangeliIzibalo zesikhangeli se-imeyilefirefoxieumqhubi we-intanethii safari
Mar 8, 2013 ngo 4:04 PM
Ndifumanise ukuba le datha ayiloncedo njengokuba ucinga. Iphakamisa ukuba mhlawumbi abantu bavula ii-imeyile emsebenzini apho i-IE kuphela kwesikhangeli esifakelweyo. Kodwa le datha ayinakubaluleka kokusebenza, kuba abayili bewebhu banokujonga kumxhasi we-imeyile endaweni yesikhangeli. I-HTML yifomathi engqongqo kwaye amaxesha amaninzi ifomathi yotshintsho phakathi kwe-hotmail kunye ne-gmail endaweni ye-chrome kwi-IE, ubuncinci kwimo ye-imeyile.
Mar 8, 2013 ngo 4:25 PM
Inqaku elikhulu, Jason! Ngelishwa, ndicinga ukuba i-Outlook isalawula inkosi apho, nayo. Oko kuthetha ukuba unikezelo lubi nangakumbi-i-MS Word.
Epreli 4, 2013 ngo-10: 44 AM
Oko kwathiwa mininzi imiba yokunikezela nge-HTML ejongene nezixhobo / amaqonga. Ngokwamava ethu sidibanise i-10 ephezulu apha: http://www.informulate.com/blog/uncategorized/top-10-gotchas-to-watch-out-for-when-designing-html-email-or-enewsletters/